ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: ကျွန်တော့်ရဲ့ …. :)
ကျွန်တော့်ရဲ့ …. :)
ကျွန်တော့ကို သူငယ်ချင်းတွေအများစုက----------- ကိုပေါ လို့ခေါ်ပါတယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အလွမ်းကဗျာတွေက သူတို့အတွက်ပေါပေါတောတောနေလို့တဲ့..
နေတာက -----လမ်းဘေးမှာဆောက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ကသူဋ္ဌေးရုံမှာပါ
မွေးရပ်ဇာတိကတော့….....နာဂစ်နိုပ်စက်သွားတဲ့ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ပိုင်ရဲ့..ဇနပုပ်ရွာတစ်ခုမှာပါ
အလုပ်အကိုင် ------- မိန်းမယူဖို့မခိုင်လုံတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာပါ ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ …
ပြောတော့ဘူး သူဋ္ဌေးသိရင် အလုပ်ဖြုတ်ခံနေရအုံးမယ် ..
ကျွန်တော့ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် ---------- ကောင်မလေးတွေဆိုဦးစားပေးပါတယ် …စတာနော် ..နောက်တတ်လို့
နံပါတ်တစ် … ကိုယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေး
အရောင်ဆိုရင် ---------- အနီ ။ အနက်၊ အဖြူ
အစားအစာဆိုရင် ---------- ဗိုက်ဝတာမှန်သမျှ ။ အရသာရှိဖို့တော့လိုတယ်နော် …ဟဲဟဲ
သီချင်းဆိုရင် ---------- လွမ်းလို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းမှန်သမျှကြိုက်တယ် ..အထူးသဖြင့် IC ….
ကျွန်တော်လေးစားရသောလူ …ပညာသင်ပေးသူမှန်သမျှ ။ လေးစားထိုက်သူမှန်သမျှ
ကျွန်တော့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ---------- သူငယ်ချင်းမှန်သမျှ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးပဲ။ မခွဲခြားပါဘူးကွယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပိုတယ် ..
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် ---------- ချစ်သူနဲ့ ဟီးဟီး……ပြောတော့ဘူး …အော်…ပြောဘူး ။
အမုန်းဆိုတာ …. ကျနော် အရင်က ချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်အုံးမယ် ။
အချစ်ဆိုတာ … အလွမ်းတွေပါ ကျနော်ကတော့ဒီလိုပဲထင်တယ် ပြီတော် ရင်ခုန်သံ
တွေအရက်သောက်ခိုင်းတယ် ဘယ်အခါမှာလဲဆိုတော့ ချစ်သူကြောင့်ခံစားရရင်ပေါ့
သံယောဇဉ်ဆိုတာ....... အချစ်ထပ်ပိုလေးနက်ပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ သံယောဇဉ်တွေကို ကြမ်းခင်းပြီ အလွမ်းတွေကို ငယ်ထိပ်ပေါ်တင်
ပြီ ကိုးကွယ်ထားရပါတယ် ..
ဒါလောက်ပါပဲဒီစာကိုရေးရချင်မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ဦးဆရာ ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ ခိုင်းစေချက်
ကြောင့်ပါဟဲဟဲ ….. ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မပြောနဲ့နော် …:):):)
Posted by mhyaw lint at 9:04 AM
Labels: ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြိုက်
ရင်ထဲက အန်ကျလာတဲ့ စကားလုံးရိုင်းရိုင်းများ
””ချစ်သူထံကို အကူအညီတောင်းခံခြင်း ““